5 मा लेक नाइस सुरम्य शहरहरू भ्रमण | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5मा लेक नाइस सुरम्य शहरहरू भ्रमण
चम्केको नीलो पानी र Luscious हरियो पहाड मा बाहिर खोज्दा तल बसिरहेका परम्परागत इटालियन वास्तुकला amidst आफ्नो बिहान कफी आनंद कल्पना. जबकि यो त एउटा सपना जस्तै आवाज सक्छ, यो आश्चर्यजनक लेक कोमो भ्रमण गर्नेहरूका लागि वास्तविकता हो. यो आश्चर्यजनक गन्तव्य धेरै यात्री को इच्छा सूची मा बस्छन. यो पनि पर्दा साथ मा आफ्नो बाटो बनाएको छ हलिउड हिट र विदेशी चलचित्र! ताल नाइस इटाली को उत्तर पश्चिमी कुनामा निहित, सही गर्न अर्को स्विस आल्प्स. यसको तटमा शानदार प्राकृतिक आश्चर्य अचम्ममा परेका निश्चित शहरहरु छन्. तथापि, तपाईं एक तंग अनुसूचीमा छन् भने टिप्नुपर्छ यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूलाई एक मुश्किल कार्य हुन सक्छ. तपाईँलाई समय छोटो र चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा बाहिर गर्न आफ्नो यात्रा, यहाँ छन्5लेक नाइस मा यात्रा गर्न सुरम्य सहर.
1. मा लेक नाइस सुरम्य शहरहरू भ्रमण: रूपमा
नाइस को शहर शायद सबैभन्दा किनभने को क्षेत्र मा सबै सहर को भ्रमण छ रेल स्टेशन. यो एक देखि धेरै आगंतुकों लागि प्रस्थान विन्दु हो रेल सवारी नाइस पुग्न सबै भन्दा राम्रो र सजिलो तरिका हो. जबकि केही गएर र नाइस बाँकी अनुभव को आफ्नो यात्रा मा छोटो स्टप यो विचार, अरूलाई यो अनुभव अभिन्न भागको रूपमा हेर्न. मिश्रित भावना को कारण शहर लोकप्रियता कारण छ. यो वरपर मा ठूलो सहर बीचमा छ, र यो पूर्णतया यसको पर्यटक अपील अँगाले छ. केही मानिसहरू यस प्रेम र सबै ठाँउहरु अप भिजेको गर्न समय लाग्न र पर्यटक आकर्षण यो सुन्दर शहर. तथापि, अरूलाई के तिनीहरूले Untouched र प्रामाणिक इटालियन सहर विचार अनुभव गर्न साना शहर प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ.
जबकि केही पर्यटकहरु एक पर्यटक जाल कोमो विचार, तिनीहरू यसको मूल सुन्दरतालाई वेवास्ता गर्छन् पुरानो शहर. तपाईं सम्पूर्ण सप्ताह खर्च गर्न सक्छन् अन्वेषण नाइस र अझै पनि श्रद्धा हुन कुराहरू पाउन. वास्तबमा, कि शहर संग प्रेम पर्नु भएको पर्यटक धेरै शहर मार्फत हिंड्न समय लाग्न. त्यहाँ धेरै हुन सक्छ क्याफे र रेस्टुरेन्ट पर्यटकहरु को आगमन उद्देश्य. तथापि, त्यहाँ पनि छन् लुकेका रत्न. जस्तै रूपमा स्थान रेशम संग्रहालय, को 15औं शताब्दीका गिर्जाघर, को Porta प्रिटोरिया, र मध्ययुगीन केन्द्र अधिक adventurous प्राण पर्खिरहेका.
Bellagio नाइस देखि सिर्फ एक नौका यात्रा टाढा छ. यसलाई आफ्नो स्थान र सौन्दर्य लागि प्रसिद्ध छ. यो भूमि त्रिकोणात्मक टुक्रा दुई आधा मा ताल राइट्स कि ऊपर बस्छन. शहर एक ठाडो पहाडी र ती एक राजसी दृश्य प्रस्ताव भनेर अप हिंड्न मा स्थित छ cobbled सडकमा र घुमावदार alleys. धेरै स्थानीय र पर्यटक लेक नाइस को मुकुट jewel कल Bellagio. वास्तबमा, यो युरोप मा सबै भन्दा सुन्दर सहर रूपमा मतदान भएको थियो. यो पक्कै पनि सबैभन्दा लोकप्रिय र सबैभन्दा क्षेत्रमा भ्रमण छ. तपाईं आइपुग्दा एक पटक, तिमी किन बुझ्न. तपाईं Bellagio भ्रमण भने, बनाउन तपाईंसँग क्यामेरा ल्याउन निश्चित. सही तस्वीर भनेर त्यहाँ एक ठाउँ छ भने दिनुहुनेछ, यो निश्चित Bellagio छ.
बर्गामो कसरी गाडिहरु गर्न
3. मा लेक नाइस सुरम्य शहरहरू भ्रमण: Varenna
लेक को पूर्वी तट मा नाइस Varenna निहित. जबकि यो ठूलो सहर गर्न आकार मा तुलना गर्न सक्छ, यो अझै पनि अवश्य-यात्रा स्थान छ. यो सुरम्य परम्परागत इटालियन माछा मार्ने गाउँ हो ठूलो शहर जीवनको प्रयास र bustle टाढा प्राप्त गर्न चाहन्छ कि कुनै लागि अवश्य-हेर्न. समय तपाईं नाउ मा बस्न रूपमा अझै पनि खडा र नीलो पानी र hovering पहाड मा ताक देखिन्छ. एक पटक तपाईंलाई सबै लिन, को cobbled लेन अनुभव गर्न वरिपरि हिंड्न, सुरम्य चर्च, र Varenna को शानदार विला. मार्क गर्न निश्चित विला Monastero हेर्न आफ्नो ठाँउहरु मा. यसलाई सधैं सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छैन, तर तपाईं भाग्यशाली हो भने, तपाईं परम्परागत इटालियन facades र भिला को अंदरूनी देख्नुहुनेछ. तपाईं ताल बाहिर हेर्न गर्दा विदेशी वनस्पतिहरू पूर्ण लामो र पातलो उद्यान मार्फत एक पैदल लिन.
मिलान Varenna गाडिहरु गर्न
फ्लोरेन्स Varenna गाडिहरु गर्न
Varenna गाडिहरु गर्न ओस्लो
जेनोआ Varenna गाडिहरु गर्न
लेक नाइस को पश्चिमी बैंकहरू मा, तपाईं Menaggio को सुन्दर शहर भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ. Menaggio यसको आश्चर्यजनक दृश्य र थुप्रै आकर्षित गर्ने एक ठूलो शहर हो सुन्दर वास्तुकला. परम्परागत इटालियन शहर संग आसपास प्राकृतिक सौन्दर्य मिश्रणों को मिश्रण. शहर भवनहरु धेरै छ कि 19 औं सताब्दी गर्न मिति फिर्ता. को Piazza Garibaldi अनिवार्य सबै स्थानीय र पर्यटक लागि केन्द्रीय भेला ठाउँ छ. त्यहाँ क्याफेहरु र रेस्टुरेन्टहरु कि उत्साह र जीवन विकीर्ण को एक अधिकता छ. Menaggio पनि इतिहास प्रेमीहरूको लागि अवश्य-यात्रा हो. शहर पहिलो र दोस्रो विश्व युद्ध मा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका. आजकल, धेरै पर्यटन क्षेत्र मा महत्वपूर्ण वरपरका दृश्यावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ.
Pavia कसरी गाडिहरु गर्न
ब्रेस्सिया कसरी गाडिहरु गर्न
बोलोग्ना कसरी गाडिहरु गर्न
मोडेना नाइस गाडिहरु गर्न
5. मा लेक नाइस सुरम्य शहरहरू भ्रमण: Tremezzo
तपाईं महान् होटल सबै लक्जरी र सौंदर्यशास्र साथ पोखरी नाइस अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि Tremezzo भ्रमण. Tremezzo ताल को लोकप्रियता अँगाले छ र निर्णय गरेको छ कि एक शहर आगंतुकों लागि एक अद्वितीय र शानदार अनुभव सिर्जना गर्न छ. यसको अधिक परम्परागत रुप र महसूस टाढा straying बावजुद, Tremezzo अझै पनि यात्रा गर्न एक अद्भुत शहर छ. यो Bellagio गर्न एकदम नजिक छ र अझै पनि यो केही बज छ कि एक शान्त ठाउँमा हेर्न चाहनुहुन्छ कि धेरै को लागि एक स्टप छ. जबकि शहर मा होटल र विला पर्यटकहरू धेरै ड्राइव, शहर अझै पनि केही अचम्मको ठाँउहरु छ. सेन्ट को चर्च. मारिया, उदाहरणका लागि, Madonna Nera यसको अविश्वसनीय मुर्ति लागि लोकप्रिय छ. देखि अलग, छन् प्यारा बगैंचाहरु को माध्यम बाट टहल्न र लेक कोमोको दृश्य र ध्वनिहरूको आनन्द लिनुहोस्.
Tortona कसरी गाडिहरु गर्न
Mantua कसरी गाडिहरु गर्न
पियासेंजा नाइस गाडिहरु गर्न
नाइस गाडिहरु गर्न लिभोर्नो
यी मात्र हो5लेक नाइस मा यात्रा गर्न सुरम्य सहर. तथापि, ताल आश्चर्यजनक दृश्यहरु र सुन्दर सहर भन्दा प्रस्ताव गर्न थप धेरै छ. लेक नाइस यात्रा र रमाइलो पानी गतिविधिहरु आनन्द, अचम्मको sunsets, र रोमाञ्चक hikes. पुस्तक एक रेल र पोखरी नाइस र वरपरको विचित्रताहरू यसलाई धारण अन्वेषण.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 मा लेक नाइस सुरम्य शहरहरू भ्रमण” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fpicturesque-towns-lake-como%2F%3Flang%3Dne – (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#लेककोमो comolake europetravel eurotrip इटाली यात्रा रेल सुझावहरू रेल यात्रा यात्रा